तातोपानी भन्सारबाट आउन थाल्यो रासायनिक मल (भिडियो सहित) Global TV Nepal
तातोपानी भन्सारबाट आउन थाल्यो रासायनिक मल (भिडियो सहित)
सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप लगायत पहाडी जिल्लाका किसानलाई लक्षित
ग्लोवल टि.भी. आइतवार, चैत्र १, २०७७ 0
नेपालको उत्तरी सीमानाका तातोपानीबाट पहिलो पटक नेपालमा रासायनिक मल भित्रिएको छ ।
रासायनिक मल ल्याउन जिम्मेवारी पाएको सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले पहिलो पटक उत्तरी नाकाबाट रासायनिक मल भित्रयाएको हो । कुल ४ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी गरिएकोमा फागुन २३ यता २ सय ८० टन युरिया मल भित्रिएको छ ।
चीनको सिगात्सेसम्म रेल र त्यहाँबाट कन्टेनरमार्फत् तातोपानीसम्म मल ल्याइएको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले गत फागुन २३ गते पहिलो पटक तातोपानी नाकाबाट रासायनीक मल नेपाल भित्रिएको जानकारी दिए । हरेक दिन ४/५ वटा कन्टेनरमा रासायनिक मल आइरहेको छ । उनले भने,‘आयात गर्दा प्रयोग हुने कन्टेनरको सुविधा राम्रो भए १ महिनामा सबै मल आइसक्नेछ ।’
उत्तरी नाकाबाट पनि रासायनिक मल ल्याउँदा किसानले समयमै सस्तो दरमा मल प्राप्त गर्नेे सिल्क ट्रान्सपोर्टका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले बताए । कम्पनीले प्रति मेट्रिकटन करिब २० करोड नेपाली रुपैयाँमा मल ल्याएको हो । चीनबाट ५ दिनमा नाकासम्म र ७ दिन भित्र काठमाडौंसम्म मल ल्याउन सकिने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ ।
यता कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव काञ्चनराज पाण्डेले उत्तरी नाकाबाट मल ल्याउँदा किसानलाई प्रतिकेजी २ देखि ३ रुपैयाँ सस्तो पर्ने जानकारी दिए । सुरुमा परीक्षणका लागि ४ हजार टन मात्रै ल्याईएको हो । तातोपानी नाकाबाट भित्रिएको मल सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप लगायत पहाडी जिल्लाका किसानलाई लक्षित गरिएको सहसचिव पाण्डेको भनाइ छ ।
चीनबाट मल ल्याउन पहिलोपटक साल्ट ट्रेडिङले आव्हान गरेको ग्लोबल टेन्डर मार्फत सिल्कले अनुमति पाएको हो । भारत हुँदै मल ल्याउने विकल्पमा अहिले तातोपानी नाकाबाट पनि मल ल्याउन थालिएको हो ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले भने,‘ किसानले प्रतिकेजी करिब १८ रुपैयाँमा मल खरिद गर्न पाउनेछन् । बंगलादेशबाट जीटुजीमार्फत् मल आयात भइरहेको र तातोपानी नाकाबाट पनि मल आयात सुरु भइसकेकाले आगामी वर्ष किसानलाई मल अभाव हुँदैन ।’
मलको प्रतिबोरा औषत खरिद मूल्य २ हजार ३ सय २२ रहेको छ । १ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ ७७ पैसा अनुदान सहित काठमाडौं, बनेपा, बिदुरका किसानले प्रतिबोरा ८ सय ८८ रुपैयाँमा मल खरिद गर्न पाउनेछन् । भूकम्पपछि ठप्प भएको तातोपानी नाका गत वर्षदेखि सामान्य रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । नाकाबाट दैनिक १४ कन्टेनर सामान पनि आयात भइरहेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी मल आयात भइरहेको छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ,आजै शपथ लिने
विवाद समाधान गर्न एमालेमा बन्यो १० सदस्यीय कार्यदल
नेताहरुको सफलता मापनको आधार सत्ता र शक्ति मात्रै हो त ?
लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद बिमला वली सम्पर्कबाहिर
विप्लव–बालुवाटार वार्ता ,आफ्ना नेता कार्यकर्ता १० दिनभित्र रिहा गर्न सरकारसँग माग